ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း | Ministry of Planning, Finance and Industry
Posted By : paprd_editor, Date : 07.07.20190comment
၁။ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေး ဦးစီး ဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စိစစ်ရေးမှူး-၂ (လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး(၂၁) နေရာအတွက်သတ်မှတ်အရည်အချင်းပြည့်မီသူများလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-
(က) စီးပွားရေးပညာဘွဲ့(စီးပွားရေးဆိုင်ရာဘာသာရပ်) (၈)ဦး
B.Econ(Stats), B.A(BM), B.Act, BPS, BBA.
(ခ) အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့(အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်) (၅)ဦး
M.E(E.P), M.E(Civil), M.E(IT), B.E(Civil),
B.E(E.P), B.E(E.C), B.E(Mech).
(ဂ) ဥပဒေဘွဲ့(ဥပဒေဘာသာရပ်) (၄)ဦး
(ဃ) သိပ္ပံဘွဲ့(ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်) (၁)ဦး
M.C.Sc, B.C.Sc, B.C.Tech.
(င) ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်) (၃)ဦး
(ခ) လျှောက်ထားသူသည် ၂၅-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် အသက်(၃၀)ထက် မကျော် လွန်သူ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အသက်(၃၅)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
(ဂ) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး ကိုယ်လက်အင်္ဂါပြည့်စုံသန်စွမ်းသူ ဖြစ်ရမည်။
၃။ လျှောက်ထားသူများသည် စာမေးပွဲဝင်ကြေးကျပ်၁၀၀ဝိ/- (ကျပ်တစ်ထောင်တိတိ)ကို မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ်၊ နေပြည်တော် ငွေစာရင်းအမှတ် MD-013794 စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာများကို စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာနတွင် ဝင်ကြေး ငွေကျပ် ၁၀၀ဝိ/- ပေးသွင်းသည့် ချလန် မူရင်း ပြသ၍ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
၄။ လျှောက်လွှာတွင် အောက်ပါအချက်များပါဝင်ပြီး လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် လက်မှတ် ရေးထိုး ပေးပို့ရမည်-
(က) အမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊
(ဂ) လူမျိုးနှင့် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ၊
(ဃ) ပညာအရည်အချင်းနှင့် အောင်မြင်သည့်ခုနှစ်၊
(င) မိဘအမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်နှင့် ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်၊
(စ) ဝန်ထမ်းဖြစ်လျှင် ရာထူး၊ ဌာန၊
(ဆ) ဝန်ထမ်းမဟုတ်လျှင် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့်မှတ်ပုံတင်သည့်ရက်စွဲ၊
(ဇ) ဆက်သွယ်ရန် နေရပ်လိပ်စာနှင့် တယ်လီဖုန်းအမှတ်၊
၅။ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါတို့ ပူးတွဲပါရှိရမည်-
(က) တစ်လအတွင်း ရိုက်ထားသော ပတ်စ်ပို့ ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ၊ (ကျောဘက်တွင် အမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်ရေးသားရန်)
(ခ) ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ၊ (ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ယူချိန်တွင် မူရင်းတင်ပြနိုင်ရမည်။)
(ဂ) အသက်အထောက်အထားအတွက် အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်လက်မှတ်မိတ္တူ၊ (ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ယူချိန်တွင် မူရင်းတင်ပြနိုင်ရမည်။)
(ဃ) ဝန်ထမ်း မဟုတ်သူများအတွက် (၆)လအတွင်း ပြုလုပ်ထားသော အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားမိတ္တူ၊(ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ယူချိန်တွင် မူရင်းတင်ပြနိုင် ရမည်။)
(င) ဝန်ထမ်း မဟုတ်သူများအတွက် တစ်လအတွင်းရရှိထားသော အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်နှင့် ရဲစခန်းထောက်ခံချက်မူရင်း၊
(စ) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၏ ဆေးစစ်ချက်မူရင်း၊
(ဆ) စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီး ဌာန (နေပြည်တော်)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ကို သိရှိပါကြောင်းနှင့် အနည်းဆုံး (၅)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုရေးထိုးစာတို့ ပူးတွဲ ပါရှိရမည်။
၆။ ဝန်ထမ်းမဟုတ်သူများသည် လျှောက်လွှာများကို စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင် ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊နေပြည်တော်သို့ လိပ်မူ၍ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ စာတိုက်မှ မှတ်ပုံတင်၍ သော်လည်းကောင်း ၂၅-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့(ကြာသပတေးနေ့) ရုံးချိန် အတွင်း နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။
၇။ ဝန်ထမ်းများသည် လျှောက်လွှာကို မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဌာနထောက်ခံ ချက်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ဤဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့်တိုးတက်မှုအစီရင် ခံရေးဦးစီးဌာနသို့ ၂၆-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့ (သောကြာနေ့) ရုံးချိန်အတွင်း နောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရန်ဖြစ်သည်။
၈။ သတ်မှတ်ရက်ထက် နောက်ကျပေးပို့လာသော လျှောက်လွှာများနှင့် သတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီသူများအား ဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
၉။ လျှောက်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို စိစစ်ပြီးပါက သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူ များသည် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို ၃-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့ (စနေနေ့)နှင့် ၄-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့)တို့တွင် ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်၍ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားများကို ၁-၈-၂၀၁၉ရက်နေ့ (ကြာသပတေးနေ့)မှ ၂-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့ (သောကြာနေ့) အထိ စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်တွင် ရုံးချိန်အတွင်း ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားမူရင်းနှင့်အတူ လာရောက် ထုတ်ယူ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ ရေးဖြေစာမေးပွဲဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
၁၁။ ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများကိုသာ နှုတ်ဖြေစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးမည့် နေ့ရက်များကို ဤဝန်ကြီးဌာန Website တွင် ထပ်မံကြေညာသွားပါမည်။
၁၂။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေးဦးစီးဌာန ဖုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၀၆၀၆၆၊၀၆၇-၃၄၀၆၀၆၇၊၀၆၇-၃၄၀၆၂၂၄ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာ နှင့် ကိုယ်ရေးအကျဉ်းပုံစံများကို စီမံကိန်းစိစစ်ရေးနှင့် တိုးတက်မှုအစီရင်ခံရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ နေပြည်တော်နှင့် ဤနေရာတွင် Click ၍ ရယူနိုင်ပြီး၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ၏ အမည်စာရင်းအား ဤဝန်ကြီးဌာန Website www.mopf.gov.mm တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားပါမည်။